Sheekh Shariif oo la kulmay Madaxda Hirshabelle – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabelle Maxamed Cabdi Waare iyo kuxigeenkiisa iyo qaar ka mid ah Golaha wasiirada maamulkaas ayaa waxaa ay hooyga uu ka degan yahay Magaalada muqdisho ku booqdeen Madaxweynihii hore ee dowladii KMG aheyd ahna hoggaamiyaha Xisbiga himilo Qaran Sheekh Shariif sheikh Axmed.
Kulan gaar ah ayay wada qaateen, iyaga oo iska wareestay xaaladaha guud ee dalka sigaar ah xaalada dhaqaale iyo mid amni ee deegaanada Hir-Shabeelle,waxaana Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu Madaxda Hir-Shabeelle u sheegay in uu dhawaan booqasho ugu tegi doono.
Saacadihii la soo dhaafay ayaa Madaxweynihii hore ee dowladii KMG aheyd ahna hoggaamiyaha Xisbiga himilo Qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu Magalada Muqdisho ka waday kulamo kala duwan oo uu la qaadanayey siyaasiyiin iyo Wakiilada Beesha Caalamka eek u sugan Magalada Muqdisho.
← MD Deni oo casuumaad u fidiyay Madaxda Dalka → Xasan Sheekh fariin u diray MD Farmaamjo